एक दिन अति पूर्ण सुधार गर्न | खेल समाचार शीर्षकहरू विश्व लेख WebSite.WS | GVMG - विश्व वायरल मार्केटिङ समूह
खेल समाचार शीर्षकहरू विश्व लेख WebSite.WS > सबै > एक दिन अति पूर्ण सुधार गर्न
एक दिन अति पूर्ण सुधार गर्न
सप्ताह अन्त मा संग समाधान गर्न पनि भरिएको दिन, र म कुनै निद्रामा र तनाव को टालटुल संग एक हप्ता बन्द छु. एक असल मित्र र म एक स्थानीय पुस्तिका / मित्र सेट अप एक फ्लाई दोकान मालिकसँग एक व्यापार बैठक लागि दक्षिणी सीटी गरेको तट गर्न लाग्यौं. माछा कथाहरू र व्यापार भाषण मान्छे को एक समूह संग एक नयाँ मित्रता माथि र्याप, को windiest रूपमा, wettest, र 06 को coldest रड कास्टिंग प्रदर्शन′ भयो, हामी हाम्रो व्यापार समाप्त. मेरो यात्रा साथी र म एक मित्र पछि र हामी केहि भयो अघि सही ज्वारभाटा मा प्रारम्भिक बिहान माछा मानिन्छ थिए एक स्थान गर्न तट पुस्तिका एक सानो उत्तर. एक संग संयुक्त निद्रामा कमी एक पागल काम हप्ता देखि शरीर बाहिर जल, राम्रो माछा मार्ने संग दिन सुरु गर्न मेरो इच्छा भङ्ग. दिन नदी को मुख नजिकै यस कुरा प्रस्तुत गर्न सक्छ सबैभन्दा खराब समय र अवस्था लागि बसोबास मलाई पैदा गर्न. मेरो आदर्श वाक्य: आफ्नो माछा पकडने भने 'तपाईं माछा समात्न सक्छ’ कहिलेकाहीं तपाईं बस माछा समात्न सक्छ. पानी मा हामी कहिल्यै fished थियो. हामी मेरो स्थानीय मित्र र माछा गुरु निर्देशन पछि र नदी को मुख नजिकै यस कुरा को अन्त गर्न हाम्रो माइल पैदल थाले. एउटा सुन्दर संग 40 डिग्री, वर्षा, 30 प्लस हाम्रो प्लेट मा मील आँधी दिन, हामी दक्षिणी सीटी माछा बाहिर लाग्यौं. विगतमा, म कहाँ पुस्तिका मेरो स्थानीय पानी सम्म मेरो भाग्य र कौशल सधैं मेल खाने छैन. हालसम्म काम पानी बन्द मलाई राखिएको छ, र रात माछा मार्ने अझै ROCKIN छैन’ र rollin '. हामी गलत ज्वारभाटा माछा पकडने र माछा समात्न हुनेछ छन् भनेर चेतावनी को निडर , हामी बिन्दु गर्न चार्ज; ‘ त्यहाँ schoolies छन्, हामी अझै पनि केही माछा मा प्राप्त’ .यो बिहान खानको उत्पादन गर्ने असंख्य संख्या नहुन सक्छ, तर माछा कुनै पनि कम.5casts र फोन छल्ले, मेरो स्थानीय मित्र सोध्छन् 'तपाईं अझै माछा प्राप्त गरे?’ 'कुनै’ 'फेरि भन्नुभयो’ उस्ले भन्यो, 'सम्म प्रतीक्षा 6:30बजे को ज्वारभाटा परिवर्तन गर्न सुरु गर्दा. यो पहिले नै 3:30 र म एक चौथाई मा पानी बन्द हुनुपर्छ 6. म फोन बन्द प्राप्त, केही minuets पछि एक हिट, र माछा! मौसम को पहिलो Striper. यो धेरै पछि म गर्न प्रयोग छु भन्दा आए. काम पनि मार्थाको अंगुरबारी बन्द मलाई राखिएको छ, र म ग्राहक संग बुक छैन छु मई सम्म. यो गाढा टनेल को अन्त मा एक प्रकाश हो. हामी थप माछा फसाउन निश्चित हो. दुई घण्टा बितेपछि हामी न एक हिट छन्. यसैबीच किनारमा को दक्षिण पक्षमा, gulls यो Cove बाहिर बिल्ली काम गर्दै. बल्लतल्ल हावा मा उड गर्न सक्षम, तिनीहरूले माछा हो कि एक तीतो मीठो सम्झना हो त्यहाँ, तर हामीलाई नजिक छैन. यस समयमा मेरो पेट यसलाई छोड्न समय भन्ने मलाई बताउन सुरु, खाना लागि , तर सानो अझै पनि आवाज भन्छन् 'यसको माथि, आफ्नो थप एक माछा प्राप्त छैन’ यो आवाज माछा मार्ने थुप्रै ठूलो दिन नेतृत्व छ, र पनि केही खराब व्यक्तिहरूलाई समाप्त भएको छ. यसरी धेरै एक सानो माछा लागि काम हो? यो आफ्नो अधिकांश समय फालिएको बिताउनुहुन्छ गर्ने मान्छे को लागि छ 16 मा इन्च eels 2:00 गाई बास फसाउन छु. मलाई चिसो लागेको छ, थकित र तल चलान. मेरो साथी फ्लाई माछा मार्ने एक हार्ड दोस्रो वर्ष थियो. कुनै इस्पात उहाँलाई यो जाडो लागि सुने, आज skunked. म माछा मार्ने आनन्द मा दरार आफ्नो अनुहार मा सेट हुन सक्छ कि चासो संग भन्दा हेर्न. म सबै हेर्नुहोस् ठूलो उज्ज्वल छ, रातो, भिजेको हावा कुटपिट मुस्कान. 'तपाईं जाने वा माछा मार्ने राख्न चाहन्छु?’ उसले भन्यो. म यसलाई दुई र आधा घण्टा घर Gotta जाने गर्नुभएको छ र म अझै पनि एक फ्लाई माछा मार्ने कुरा बारे यो मान्छे भेट्न छन्. यो पानी मा माछा वा समय बारे सधैं छैन. यो बाहिर विश्वका बाँकी छैन जब जीवनको जंगल मार्फत एक बाटो रही र पिटाई बारेमा मा भाग्ने आफ्नो Sliver प्राप्त गर्न. यसको एक घण्टा वा एक बीस घण्टा हार्ड कोर रन मौसम, रोक, तपाईंको Passion सुन्न, यसको सधैं यो मूल्य. एक दिन अति पूर्ण सुधार गर्न
विभाग: सबै, स्थान ट्याग: बारेमा, कला, arts, ask, business, बिरालो, ल, अन्त, fishing, माछा मार्ने उड, खाना, guide, home, घंटा, जीवन, सूची, meetin, meeting, र, बारेमा, phone, विद्यालय, spot, तनाव, travel, जीत, काम, काम, विश्व
कसरी फिट र एरोबिक संग स्वस्थ प्राप्त गर्न
Humminbird SmartCast RF15 – प्रयोग गर्न सजिलो, तपाईं आफ्नो माछा कोर्सिङ मदत
एक गोल्फ फिटनेस कार्यक्रम कसरी महत्वपूर्ण छ
मोनाको ग्रान्ड प्रिक्स 2006 & Kimmi Raikkonen
तपाईंको शारीरिक सुधार र तपाईंको स्विङ रूपान्तरण हेर्नुहोस्
राम्रो कारणहरू एक नाउ खरिद गर्न
को छुट गोल्फ क्लब खरीद
द पेट मांसपेशीमा आउट ल्याउने
मत्स्य पालन ‘ हाम्रो वंशाणु मा यो छ?
उचित दौड जूता कसरी चयन गर्न
ताजा जल मत्स्य पालन: मूल कुराहरू तपाईंलाई थाहा हुन जरुरी
एक quitter कहिल्यै जीत अनि विजेता कहिल्यै इस्तीफा
लस भेगास गोल्फ सुझाव
यो वालोन Name Fl'che 2006 परिणाम
Pavin खिच्छ 10 वर्ष गोल्फ भोकमरी
सही गोल्फ क्लब लिँदै अनुशासन चिन्न
पेन्टबल तपाईं लाभ चाहनुहुन्छ?
एक गैंबल बनाउन एक पोकर खेल
केही महान् फ्री गोल्फ क्लब सुझाव प्राप्त!